किन भए ‘लाउरे’ बाट निर्देशक निगम श्रेष्ठ आउट ? « Ramailo छ
किन भए ‘लाउरे’ बाट निर्देशक निगम श्रेष्ठ आउट ?
प्रकाशित मिति : Jul 10, 2017
सत्तरी प्रतिशत सुटिङ बाँकी हुँदा फिल्म ‘लाउरे’ बाट निर्देशक निगम श्रेष्ठ आउट भएका छन् । प्राविधिक तथा कलाकारसँग असमझदारी भएपछि फिल्म निर्माण कम्पनी दुर्गिश ब्यानर निर्देशक श्रेष्ठलाई हटाउन बाध्य भएको हो । लाउरे लाई अब स्क्रिप्ट राइटर विक्रम सिंहले गर्नेछन् । विक्रम फिल्मका कलाकार समेत हुन् ।
निर्देशक श्रेष्ठ र ‘लाउरे’ टिमबिच कुन कुरामा विवाद पर्यो भन्ने विषयमा दुवै पक्ष गुपचुप छन् । कम्पनी प्रमुख दुर्गिश थापाले यस विषयमा केही पनि नबोल्ने बताउँदा निर्देशक श्रेष्ठ पनि सम्पर्कमा छैनन् । उनको मोबाइल अफ छ । तर, बुझिए अनुसार टिमको सदस्यलाई निर्देशक श्रेष्ठले गलत व्यावहार गरेपछि उनी फिल्मबाट निकालिएका हुन् । निर्देशकको विवादले रोकिएको फिल्म यसै सातादेखि धरानबाट सुरु हुनेछ ।